Izimpumputhe zephakethe zamafasitela angama-Roman blind | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Izimpumputhe zephakethe zamafasitela angama-roman blind
U-Alicia tomero | 16/11/2021 12:53 | Kubuyekezwe ku- 18/11/2021 09:36 | Umhlobiso
Amakhethini asendulo Yilezo zicucu zendwangu ezinkulu, ezilawulekayo, eziguquguqukayo ezimboza amafasitela nezingxenye zodonga. Uma ukhathele amakhethini, lapha siphakamisa inzuzo engcono kakhulu yokukwazi hlinzeka ngendlela ephelele nenhle. Lolu hlobo lwamakhethini lumboza kuphela lelo windi elincane futhi lenze igumbi libe yindawo ethule futhi ephumuzayo.
Nakuba zonke izimpumputhe zingase zibukeke zifana, ngokombono zihlukene kakhulu ngokuma nokusebenza. Sinezimpumputhe zephakethe eligoqayo, elinebhokisi lazo phezulu bese sithatha ikhethini lapho ligoqwa. Noma sinezimpumputhe zephakethe eziqoqwe ngokwemvelo lapho zingagoqi khona njengangaphambili. Imvelaphi yayo kanye nomklamo oqoqiwe uzokwenza ukuhlala kungokwemvelo kakhulu. Singayithola ku izimpumputhe zephakethe , ezenziwe ngobuntu, izinto zekilasi lokuqala futhi zenziwe ukulinganisa.
1 Kufanele ngikhethe kanjani uhlobo lwekhethini?
2 Izinto kanye nemibala ye-paqueto blinds
3 Izimpumputhe ezipakishwe zilinganiswa futhi zibekwe kanjani?
Kufanele ngikhethe kanjani uhlobo lwekhethini?
Ngokuqinisekile ushiywe ngokungabaza ukuthi ukhetha ikhethini elikhulu noma izimpumputhe, ezenziwe ukulinganisa ngomklamo osebenzayo. Abaningi ngale kwezimpumputhe zendabuko, esinazo i-paqueto noma 'ikhethini laseRoma' amakhethini njengenguquko, kodwa isitayela samakhethini sakudala, lapho sinikeza khona a ukuhlala okufudumele nokukhanya okuphelele.
Uma ufuna izimpumputhe zephakethe, sinalolu hlobo lwekhethini elenziwe ngalo impahla eguquguqukayo engashwabani, lapho uma indwangu yakho ithathwa, igoqwe ngokwemvelo. Lapho ikhethini limbozwa futhi, indwangu yalo ibuyela esimweni sayo sokuqala ngaphandle kokungapheleli. Kudingeka kuphela ukubekwa kwayo induku encane ezohlanganiswa nezingwegwe ezimbili ukuze ifakwe ngokuphelele phezulu kwefasitela.
Izimpumputhe ezigoqekayo Ngiyayithanda futhi kakhulu, ngoba imayelana ikhethini eliqine kakhulu, eyenziwe ngezinto ezivumela ukukhanya kudlule noma kukhawule ngokuphelele. Indlela yayo isebenza ngeshubhu okufanele ibekwe phezulu odongeni nalapho indwangu izogoqwa khona lapho ufuna ukuveza iwindi.
Izinto kanye nemibala ye-paqueto blinds
Ngokunikezwa komumo nokwakheka kwayo, uhlobo lwe-blind paqueto noma 'ikhethini laseRoma' aklanywe ngendwangu ephelele futhi yakhelwe ukuze ingashwabeki. Ngaphezu kwalokho, indlela yayo yenziwa ukuze lingathwali izinduku futhi indwangu yayo iqoqwe ngokwemvelo ngokusebenzisa izindandatho kanye ngosizo lwentambo. Ngokudonsa le ntambo noma intambo izothatha indwangu ngokwemvelo, njengokungathi amagagasi. Ngale ndlela indwangu izoba ne-drape elula kakhulu yendwangu yayo futhi inikeza ukuhlala okufudumele ngaphandle kokukhanya ngokweqile.
Impahla engcono kakhulu esetshenziswa ilineni njengoba inikeza ukumelana okukhulu. Nakuba izindwangu ezifana neseyili nazo zakhiwe, zenziwe nge ukotini wekhwalithi ephezulu kanye ne-polyester engu-50%.. Zonke zingagezwa ekushiseni okuphezulu kwama-30 ° kanye nethuba lokuhlanza okomile, kodwa ngokuqapha. Bangakwazi ke ironed at lokushisa esiphezulu 110 °. Kunemibala eminingi ukuhlanganisa ngokuphelele nesitayela sakho kanye negumbi lakho.
Izimpumputhe ezipakishwe zilinganiswa futhi zibekwe kanjani?
Ukuze ukwazi ukuthenga impumputhe yangokwezifiso kufanele wenze isilinganiso esihle. Ekhasini labo ungakwazi ukulandela kalula izinyathelo futhi ugcwalise amabhokisi ngezinyathelo okufanele zithathwe. Indlela esebenza ngayo ayiyona inkimbinkimbi, kodwa izobaluleka kakhulu ukuthi ibonakale ngokuphelele nokuthi imiyalelo ekhonjiwe iyalandelwa. Uma iwindi lingenazo izindonga eziseceleni, kunconywa ukuthi ungeze ububanzi bewindi plus 10 cm ohlangothini ngalunye.
Uma kungenjalo iboshwe nhlangothi zombili zefasitela, khona-ke kufanele ulinganise ububanzi befasitela futhi susa isentimitha elingu-1 ohlangothini ngalunye. Uma kwenzeka ihlukaniswa uhlangothi olulodwa lwefasitela ngoba kukhona udonga noma insika, ububanzi befasitela kuzodingeka kubalwe. kanye no-10 cm ukusuka ohlangothini khululeka.
para linganisa ubude bempumputhe ungathatha njengendawo yokuqala umkhawulo wesilingi nokuthi ufuna ihambe kude kangakanani phansi wezimpumputhe. Kufanele ucabangele zonke izithiyo ongahlangabezana nazo emzileni wakho, uma kwenzeka kuzodingeka wenze uhlobo oluthile lokwengeza noma ukuhlela.
Izimpumputhe zephakethe zinhle futhi ziyasebenza, ezinamamodeli ahlukene kanye neziphakamiso kuye ngesitayela osidingayo ngokuhlala kwakho. Ubuhle balezi zimpumputhe zephakethe esizikhethile ukuthi zivikela ekukhanyeni ngokweqile, zinikeza ubumfihlo futhi zingokwemvelo kakhulu emehlweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Umhlobiso » Izimpumputhe zephakethe zamafasitela angama-roman blind
5 imisebenzi yezandla yokuhlobisa uKhisimusi
Imisebenzi yezandla yokuhlobisa indlu ngokufika kwamakhaza